Hevitra ambongadiny 3PCS fikolokoloana biby fiompy napetraka miaraka amina mpanamboatra diamondra mena diamondra | Icool
Modely ： IC-70-4
Fitaovana ： 9CR Stainless Steel
Loko: avana, volafotsy, mainty
● Ahitana - 7 Inch, hety mihety volo 40 ho an'ny alika + hety miendrika alika 7 mirefy hety miolikolika + hety miisa 7 mirefy. Ny volombava miolakolaka dia tsara amin'ny fametahana loha, sofina, maso, tongotra malemy sy paoka. Ny fanetezana manify dia ny fanalefahana ireo biby tezitra. Ny hety alika mahitsy dia ny manapaka volo lava sy volo lava amin'ny vatana, ireo hety miambina alika ireo dia handrakotra ny filanao fikojakojana isan'andro. Io ihany koa no safidy tsara indrindra hampiasana trano.
● Ergonomics Offset Handle - Ny tantanan'ny hety miambina alika dia novolavolaina mba hahazo aina be ary hanampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretina sy ny tsy fahafaham-po ary misy koa ny fitsaharana amin'ny rantsan-tànana voavolavola, natao ho an'ny ergonomika tokoa ho an'ny chunking, manify ary manapaka ny volon'ny biby. Tsy hahazo aina ny mampiasa mandritra ny fotoana maharitra. Ny visy fihenjanana azo haingoina ilaina amin'ny vatosoa dia manamora ny fanamboarana ny hety hifanaraka amin'ny filàna ary miantoka fandefasana hety milamina isaky ny mandeha.
● 100% Namboarina tanana - Ny hety amin'ny fikolokoloana alika tsirairay dia misy muffler eo anelanelan'ny tanany izay midika fa fikolokoloana mangina ho an'ny saka na alika mora tohina, tsy mampatahotra ny biby fiompinao. Ireo hety miahy ny biby fiompy dia Quiet Alternative amin'ny Electric Clipers ho an'ny Pets Sensitive. Tonga lafatra ho an'ny mpikarakara biby fiompy matihanina na mpampakatra DIY an-trano.
9CR Stainless vy na namboarina
Hety mahitsy sy manify ary miolakolaka
Teo aloha: Gunting ho an'ny biby fiompy 8PCS napetraka miaraka amin'ny kitapo hoditra
Manaraka: Volavolan-tsolika noforonina kilasika miendrika volon-koditra vita amin'ny biriky manga
Alika japoney mainty mifono vy manety pet S ...